९ बर्षिय सचिन परियारले तोडे सबै रेकर्ड, लोक गीतको इतिहासमै २४ घण्टा नबित्दै ३ नम्बर ट्रेन्डिङमा, १ मिलियन भ्युज नाघ्यो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…. – SUDUR MEDIA
९ बर्षिय सचिन परियारले तोडे सबै रेकर्ड, लोक गीतको इतिहासमै २४ घण्टा नबित्दै ३ नम्बर ट्रेन्डिङमा, १ मिलियन भ्युज नाघ्यो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)….
भिडियो रोचक संगीत
January 4, 2021 AdminLeaveaComment on ९ बर्षिय सचिन परियारले तोडे सबै रेकर्ड, लोक गीतको इतिहासमै २४ घण्टा नबित्दै ३ नम्बर ट्रेन्डिङमा, १ मिलियन भ्युज नाघ्यो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)….
गुल्मी मुसिकोट थाई घर भएर अहिले तम्घासमा बसोबास गरिरहेका र केही समय अगाडिबाट टिकटकदेखि युटयुबसम्म सबैमा आफनो हसाउने कला, जादूमय स्वर र मिठो बोलीले भाईरल भएका भाई सचिन परियारको पहिलो गित “ओठ खोलेर” सार्बजनिक भएको छ । महेन्द्र भण्डारीको लय र एरेन्ज रहेको यो गितमा सबै लगानि सबिन क्षेत्रीको रहेको छ ।
सचिनले रबिना बसेल अर्की भाईरल नानीसँग स्वरमा स्वर मिलाएर यो गित गाएका छन भने यसमा थप साथ दिएका छन स्वरमै चर्चित गायक अर्जुन कुवर र अश्मिता बुढाथोकीले भने शब्द रहेको छ गणेश अधिकारी र थेगो महेन्द्र भण्डारीको ।
जसलाई निर्देशन गरेकी छिन गुरुआमा स्मिृति तिमिल्सिनाले । जसमा चर्चित मोडल करिश्मा ढकाल, एलिना रायमाझी, अर्जुन कुवर र सबिन क्षेत्रीको पनि अभिनय र स्वयम सचिन परियारको पनि जोडदार अभिनय र कमेडी रहेको छ । सचिनको गित २४ घण्टामै युट्युबको ट्रेन्डीङ नम्बर ३ मा पर्न सफल भएको छ र १ मिमियन भ्युज नाघेको छ ।